Maastiikaa alanfatamee gatamerraa meeshaa haarawaa - BBC News Afaan Oromoo
Maastiikaa alanfatamee gatamerraa meeshaa haarawaa
Lammiin Biriitish dizaayinara taate, Aannaa Bulluus maastiikaan faayidaarra oole walitti funaanuun meeshaa fayyadan irraa hojjechuutti bobbaateetti. Yoo kana raawwattuus daandii keenya qulqulleessaa jirti.
Mastiikaa alalfachuuf waggaa waggaan addunyaarratti paawundii biliiyoona 14 kan ta'utu baasii taasifama. Maasiikaan hojiirra oole kun baay'een isaa lafatti maxxanee hafa.
Kosii daandii xureessuun beekaman keessaa sijaaraatti aanee mastiikaan isa lammaffaadha.
UK keessatti, magaalonni kana qulqulleessuuf waggaatti paawundii miliyoona 50 baasii godhu.
Aannaan garuu yaada qabdi. Waanti akka aancaatti nama qabatu kun irra deebiyuun faayidaarra ooluun meeshaan yoo irraa hojjetame maal ta'e?
Goodayyaa suuraa Aannaa Bulluus Dizaayinii Muuziyeemii Londan keessatti waa'ee qabeenya walitti fufinsaan fayyadamuu ijollee barsiifti.
Waggoota 10 dura, waa'ee pirojaktii kosii gatame deebiisanii fayyadamuu danda'uu yaaduu jalqabde. Bakkeewwan muraasa gataan akka sijaaraafi mastiikaa itti baayyatu adda baafachuun gataawwan akkamii akka irra deebiin fayyadamuun danda'amu qoratte.
"Gataawwan ani argadhe keessaa tokko mastiikaa ture. Akka dizaayinara tokkoottis duraan waan tokkoyyu kan inni irraa hojjetame waan hinjirreef baayyeen dinqisiifadhe," jette.
Attamitti akka mastiikaan hojjetame qorachuun, waanti guddaan inni irraa hojjetame gommaa sintetikii gosa polimerii pilaastika waliin walfakkaatu ta'uu hubatte.
Goodayyaa suuraa Manni maree UK mastiikaa daandiirraa meesha addaatiin qulqulleessuuf baasii miliyoona hedduun baasu
"Waantichi 'polyisobutylene'," jedhama jechuun ibsiti Aannaan. "Waanta gommaa keessaa biskiliitii keessatti arginu waliin walfakkaata."
Waanti inni harraan argamus, 'petrochemicals' zayita boba'aa uumamaa kan akka siicoo/hafaa zayitaa irraa qophaa'u.
Mastiikaan erga takkaa alalfatamee dhumee booda waanta meeshaa faayidaa qabu irraa hojjechuun danda'amu ta'uu hubatte.
Garuu callisanii dhibaa'ummaan karaarratti gatuurra namoonni akka mastiikaa itti fayyadaman arjooman attamiin amansiisuu dandeessa?
Kanaaf Annaan tarsiimoo baafatte. Qodaa bifa diimaddee qabu 'Gumdrop' jedhu qopheessitee akka namoonni mastiikaa itti fayyadaman keessatti gatan bakka gara garaatti fanniste.
Qodaan kunilleen mastiikaa faayidaa irra ooleerraa hojjetaman. Ergaaan bakka qodaan kun fannifamee jiru cinaatti barreeffames, gataan mastiikaa walitti qabamee meeshaan haarawaa irraa hojjetama jedha.
Goodayyaa suuraa Qodaan itti mastiikaa erga fayyadamnii itti gatan kunillee gataa mastiikaarraa hojjetame
Namoonni mastiikaa alalfatan garuu itti fayyadamuu?
Yunvarsiitiin Winchester qodaa kosii kana fayyadamuuf kan jalqaba mallateessedha. Yunvaristii kana keessa namoonni jiraataniifi achi keessa hojjetan 8,000 ta'an mooraa isaanii kosii mastiikaa alalfatamee gatamerraa qulqulluu taasisuu barbaadan.
Rakkoo kana furuudhaaf tooftaa lamatu hojiirra oole.
Qodaa kosii Aannaa 11 mooraa sana keessa kaa'uun ergaa biratti 'mastiikaan alakfatame bakka adda addaatti gatuurra qodaa sana keessatti yoo gatne irra deebinee meeshaa haarawaa irraa hojjechuun ni danda'ama. Mastiikaa alakfatamaa achi keessatti kuusamerraa kubbaayyaa bunaa barattoota waggaa tokkoffaaf hojjechuun danda'ameera.
"Barattoonnis kubbaayyaa kana fooliin isaa mastiikaa ykn meentaa akka hin qabne fuunfatanii mrkaneeffataniiru ," jechuun kan yaadattu dubbatti Ogeettiin Naankaluu Yunvarsitichaa, Liiz Hariis.
"Mastiikaan karaarratti hojjetaman hedduun isaanii poliimera irraa waan hojjetamaniif meeshaa haarawaa biroo irrraa hojjechuun ni danda'ama.
Goodayyaa suuraa A typical cup contains 42 pieces of used chewing gum
Buufanni Xayyaaraa Heathrow jedhamus yaalii baatii sadiif taasiseen "jijjiirama qabatamaa argamsiiseera" jechuun baasii qulqulleessuusaatiif ta'u £6,000 qusachuu danda'eera. Daandii Baaburaa Great Western jedhamus qodaa kosii mastiikaa kana buufatawwan 25 ol ta'an kaa'uun gara biraatti babballisaa jira.
Ammaafi ammatti rakkoo kosii mastiikaa kana furuu baatanis, qodaan kosii mastiikaa taa'an kun jijjiirama ilaalchaa fidaa jiru.
Mastiikaarraa Boca Mimmiidhagaa
Rakkoon biraa Aannaa mudate industirii mastiikaa irra deebiyanii fayyadamuu hojjechuuf ishee waliin hojjetan argachuudha.
Adeemsa keessa warshaa kosii irra deebiyanii fayyadamuurratti hojjetu Worsester jedhamu amansiifatte. Warshichis qodaaa kosii keessatti mastiikaa alakfatamee kuufame walitti guuruun waraqaafi maraa mastiikaa irraa adda baasuun pilaastika poliimerii biroo waliin makuun daakuun hojjechuu jalqaban.
Meeshaan hojjetamu kun akkuma akkatti waan of keessatti qabatu addaa adda ta'us yoo xiqqaate %20 kan ta'y mastiikaa of keessaa qaba.
Goodayyaa suuraa Makaan mastiikaa o'a humna guddaa qabuun baqfamee garaa maashina marfeetti naqama
Paarlaamaan UK warshaaleen mastiikaa kosii mastiikaa alakfatamee maqsuudhaaf tarkaanfii dabalataa hin fudhatan taanaan gibira dabalataa itti muruuf yaadaa jira
Maloonni biraan ittiin kosii mastiikaa kana mo'atamu yaalamaa jira.
Goodayyaa suuraa Mastiikaan gommaa sintetkii ta'erraa hojjetama
Qorattoonni mastiikaa waantota daakamuu/tortoruun biyyootti makaman ykn salphaatti qulqulleessuun danda'amurraa hojjechuuf hojjetaa jiru. Ammasitti garuu hojiin Aannaa fala gaariidha.
"Dizaayinii sirrii ta'een, akkaataa namoonni yaadan jijjiiruu ni dandeenya," jetti.